Guubie: $ 59 $ Suuq-geynta Suuqgeynta Suuqgeynta | Martech Zone
Guubie: $ 59 $ Suuq-geynta Suuqgeynta Emailka sanadkiiba
Khamiista, Sebtember 26, 2013 Jimco, Juun 19, 2015 Douglas Karr
Gubie ayaa lagu bilaabay beta waxaana laga yaabaa inuu ruxmo adduunka suuqgeynta emaylka iyada oo laga qaadayo lacag dhan $ 59 sanadkii, oo la sii daayo E-mailka Mandrill API. Waan ku faraxsanahay inaan arko qaar ka mid ah shirkadaha qiimaha jaban ee soo galaya dagaalka markay tahay iimaylka suuqgeynta. Boggan, tusaale ahaan, waxaan ku bixin jirnay laba jibbaar adeegga emaylkeenna intii aan bixin jirnay martigelin hordhac ah.
The Gubie Suuqgeynta Suuqgeynta Emailka waxaa ka mid ah:
Ololayaasha Suuqgeynta Emailka - Abuur ololeyaal suuqgeyn email ah oo dhab ahaan loo geeyo dadka isticmaala. Ka dhaadhici dadka inay akhriyaan waxyaabaha aad ka kooban tahay oo ay ku dhex galaan emayl iyo shabakadaha bulshada. U dir e-mayl soo jiidasho leh iyo indho qabasho leh qaabab emayl waxtar leh.
Samatabbixin Sare - Ku xidho Guubie adeegga dirista emaylka aad doorbidayso, sida Mandrill, MailJet, Amazon SES ama wixii kale ee SMTP ah. Tusaale ahaan, haddii aad isticmaasho Mandrill, waxaad diri kartaa illaa 12,000 emayl bilaash ah bishiiba.
Warbixinno Hormarsan iyo Xogta Isticmaal kuwooda Analytics warbixinno oo ku dar Google Analytics olole kasta si uu kuu siiyo dhammaan macluumaadka ku habboon ee aad u baahan tahay.
ROI ka fiican oo leh Imtixaannada A / B - Abuur tijaabooyin A / B aan xadidneyn si ay kaaga caawiyaan inaad ogaato farriinta ugu wax ku oolka badan ee aad ugu gudbin karto isticmaaleyaashaada.
Browser & Mac OSX / Windows App - Adigoo adeegsanaya biraawsar caadi ah sida Firefox, Safari ama Google Chrome, waxaad ku heli kartaa Guubie iyo dhammaan astaamaheeda, meel kasta oo aad adduunka ka joogto. Haddii aad rabto marin u helitaanka mobilada, waxaad sidoo kale kala soo bixi kartaa barnaamijka Guubie ee loogu talagalay Mac OSX ama Windows.
Kiciyeyaasha ku saleysan ficillada - waad abuuri kartaa kiciyayaal si otomaatig ah ugu soo dira dhalasho farxad leh macaamiishaada ama xitaa emayl soo dhaweyn labaad ah laba maalmood ka dib markii adeegsadehu abuuro koonto. Automate waajibaadkaaga suuq-geynta.
API loogu talagalay horumariyeyaasha iyo bilowga - Guubie waxay leedahay Powerful XML API, oo macnaheedu yahay horumariyayaashu waxay si fudud ula midoobi karaan barnaamijyadooda iyo adeegyadooda koontadooda Guubie.
Iyadoo Gubie, waxaad bixinaysaa mid, khidmad sanadle ah oo jaban… $ 59!
Tags: amazonemailGubieqiime jabanmandrill
Sep 26, 2013 at 4: 19 PM
59 dollor sanadkii waa raqiis hadii ay si fiican u shaqaysana waa xadi. U tagida waa inaad fiirisaa tan tan ka sii xiiso badan laakiin waa hubaal.